Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » 65% rakaabka diyaaradaha Maraykanka ayaa taageera baasaboorada tallaalka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
65% rakaabka diyaaradda ayaa taageera Baasaboorada Tallaalka
Haddii FAA ay go'aansato inay hirgeliso barnaamijka baasaboorka tallaalka, ku dhawaad ​​10kii qof ee socotada ahaa ayaa laga mamnuuci lahaa inay raacaan diyaaradda.
44% dadka Jamhuuriyiinta ah waxay sheegeen inay taageeri doonaan shuruudda dowladda si ay u keento caddaynta tallaalka si loo duulo.
48% dadka Jamhuuriga ayaa sidoo kale si toos ah u taageeri doona waajibaadka shirkadaha diyaaradaha.
95% dadka Dimuqraadiga ahi waxay taageeri doonaan dawlad ama shuruudda baasaboorka tallaalka.
Markay sii korodho kala duwanaanshaha delta, ku dhawaad ​​65% ee waraaqaha soo noqnoqda ayaa soo sheega in baasaboorka tallaalka uu kordhin doono kalsoonidooda ku aaddan badbaadada safarka hawada, sida lagu sheegay warbixin cusub. In kasta oo 90% xaashiyaha soo noqnoqda midkood si buuxda ama qayb ahaan looga tallaalo fayraska, ku dhawaad ​​10kii waraaqood ee soo noqnoqda midkood ayaa diida in la tallaalo.
Tirooyinkan waa dhiirigelin sababtoo ah xaashiyaha soo noqnoqda waxay leeyihiin tallaal aad u sarreeya. Si kastaba ha noqotee, haddii FAA go'aansato inay hirgeliso a barnaamijka baasaboorka tallaalka, ku dhawaad ​​10kii qof ee socotada ahaa mid ayaa laga horjoogsan doonaa inay raacaan diyaaradda.
Baadhitaanka ayaa la sameeyay iyada oo la adeegsanayo Database-ka Flyer Freerent Flyer, oo ay ku jiraan in ka badan 200,000 oo waraaqo iska-xaadir ah oo ka soo kala jeeda Maraykanka oo dhan. Ku dhawaad ​​65% kaqeybgalayaasha sahanku waxay ka badan yihiin 60-sano jir, iyagoo ku meeleeyay qayb halis ugu jirta jirro daran oo ka timid COVID-19.
Warshadaha socdaalka ayaa ka mid ahaa kuwii ugu adkaa ee ku dhuftay masiibada, iyadoo xannibaado lagu qasbay safarka iyo dalxiiska inay istaagaan. Soo kabashada ayaa gaabis ahayd. Sahanka 2020 ee Joogtada ah ee Flyer, 60% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay qorshaynayeen inay safraan lixda bilood ee soo socota. Hase yeeshee warbixinta sannadkan, 36% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inaysan safrin tan iyo Janaayo 2020.
Laakiin rabitaanka cuntada ee safarka ayaa sii kordhaya. Ku dhawaad ​​70% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay qorshaynayaan inay ku safraan diyaarad lixda bilood ee soo socota, iyadoo 72% dadka safarka ah ay qorshaynayaan safarro shaqsiyeed.